‘+२ को लागि विद्यार्थीको पहिलो रोजाई ब्राईट फ्युचर मावि’ – रिपोर्टर्स नेपाल
‘+२ को लागि विद्यार्थीको पहिलो रोजाई ब्राईट फ्युचर मावि’
२०७६ असार १५ गते प्रकाशित, l १६:३७
ब्राईट फ्युचर मा.वि., नैकाप, काठमाडौंका +२ विभाग प्रमुख श्यामकृष्ण महर्जन
वि.सं. २०४४ सालमा स्थापना भएको यस ब्राईट फयुचर माध्यमिक विद्यालय काठमाडौैंको पश्चिम भेगमा स्थापित र सधै उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएको विद्यालय हो । अभिभावकको सल्लाह र सझावलाई मध्यनजर गर्दै साथै नेपाल सरकारको विद्यालय शिक्षा माध्यमिका तह कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म भन्ने नीतिलाई मध्यनजर गर्दै यसपालि देखि ब्राईट युचरले कक्षा ११ सञ्चालन गरेको छ । उत्कृष्ट शिक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि सदैव तत्पर छ ।
निश्चित् रुपमा दिएर बसेका भाइबहिनीहरु अहिले के पढ्ने भनेर अलमलमा परेका छन् । यो कलेज छानु कि त्यो कलेज छानूँ भएको छ । धेरै विद्यार्थीहरु धेरै कलेजमा घुमिरहेका छन् । सबै कलेजमा आ–आफ्नै किसिमका सुविधाहरु दिइरहेका हुन्छन् । मेरो सझाव विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई यो छ कि तपाई जुनसुकै कलेज जानुस् त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिम, त्यहाँको शिक्षक–शिक्षिकाको अनुभव शिक्षण सिकाई विधि सम्पूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक पर्दछ । र, विषयहरु छनोट गर्दा विद्यार्थीहरुलाई राम्रो काउन्सिलिङ्गको आवश्यकता पर्दछ । हामीले राम्रो काउन्सिलरको व्यवस्था गरेका छौँ । साथै विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसारको विषय छान्नुपर्छ । त्यसका लागि म र मेरा टिमले विद्यार्थीलाई सही मार्गनिर्देश गर्न तयार रहेको कुरापनि तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु ।
राजधानीका सयाँै कलेजको भीडमा हाम्रो ब्रार्ईट फ्युचर कलेज अरु कलेजभन्दा अलिक भीन्न छ । म के भन्न चाहन्छु भने प्रथमताः यस कलेजमा पूर्ण पारिवारिक वातावरण साथै अति नै राम्रो शैक्षिक वातावरण छ । अन्य विशेषताहरुको कुरा गर्नुपर्दा ब्राईट फ्युचर मा.वि. विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै घम्क्ष् ीभ्ब्च्ल्क्ष्ल्न् क्थ्क्त्भ्ः बाट पनि हप्तामा १ पटक पढाइन्छ । यो वापजिाकाजकजाज बाट अध्यायन गरेको विद्यार्थीले पवमापवाजजाजाजज को अन्तर्राष्टिय मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेछन् । आनै विद्यालय भवन छ । यो हाम्रो भवन भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन हो । अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरुको कुरा गर्दा हाम्रो आनै फुटसल ग्राउन्ड छ । हामीसँग पूर्व राष्टिय खेलाडी रमेश बुढाथोकी कोचको रुपमा हुनुहुन्छ । र, स्पोर्ट कोर्डीनेटरको रुपमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपरको अतिनै विज्ञ कोच नवीन महर्जन हुनुहुन्छ । शिक्षण सिकाइ विधिको कुरा गर्दा हामीसँग अति नै अनुभवी शिक्षक÷शिक्षिकाहरु हुनुहुन्छ । हामी हाम्रा विद्यार्थीलाई शत प्रतिशत उत्तीर्ण गराउँन प्रतिबद्ध छौँ । हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको संस्कार सहितको शिक्षा पनि हो । हामी परीक्षा उत्तीर्णताको ग्यारेन्टी मात्र लिन्नौँ हामी असल र सभ्य नागरिक बनाउँने र त्यसका लागि संस्कार र संस्कृतिका विषयवस्तु पनि जोड्छौँ ।
कलेजको भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु जरुरी छ । यसमा हाम्रो आफ्नै भवन छ । त्यसमा पनि नयाँ भवन निर्माण गरेका छौँ । निक्कै आकर्षक कक्षाकोठाहरु, प्रयोगशालाहरु छन् । अझ राम्रो कुरा त हरेक कक्षाकोठामा मवामजापपमा को व्यवस्था गरेका छौँ । म्यानेजमेन्ट टिमको कुरा गर्नुपर्दा विद्यालयमा नै ३२, ३३ वर्षको लामो अनुभव भएको सरहरु हुनुुहुन्छ र सरहरुकै साथमा र सुपरभिजनमा रहि कक्षा ११ को लागि काठमाडौंको प्रतिष्ठित संस्थाहरुमा निकै लामो समयदेखि अनुभवी शिक्षक÷शिक्षिकाहरु हुनुहुन्छ र हाम्रो कलेजको शैक्षिक वातावरणको कुरा गर्नु पर्दा निक्कै शान्त वातावरणमा यहाँको पारिवारिक वातावरण नै उत्कृष्ट छ । शिक्षक–शिक्षिकाको बारेमा मैले अघि नै भनिसके कि काठमाडौंका अति प्रतिष्ठित संस्थाका निकै अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरु हुनुहुन्छ र म दावाका साथ भन्छु नेपालका कुनै पनि कलेजहरुमा भन्दा कम पढाइ हँुदैन । अर्थात हामी देशकै नमुना शैक्षिक संस्था बनाउँने उद्देश्यका साथ अघि बढेका छौँ । त्यसका लागि हामी मन, वचन र कर्मबाट समर्पित भएर लागिपरेका छौँ ।
हाम्रो कलेजमा अहिले कक्षा ११ को लागि साईन्स र म्यानेजमेन्ट दुई संकायमा पढाई हुन्छ । म्यानेजमेन्टमा हाम्रो वमापमा र मवायष्यषवक अध्यापन गराईन्छ । त्यस्तै साइन्सको कुरा गर्नुपर्दा वमापमाव र मवायवकष्वायकव को अध्यापन गराईन्छ र आगामी वर्षदेखि मानविकी सङ्कायलाई पनि जोड्छौँ । साथै सम्भव भएमा कानुनका विषय पनि जोड्ने प्रयासमा छौँ ।
खासमा कुरा के छ भने हाम्रो उद्देश्य भनेको गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा यो कुरा वा त्यो वर्गभन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीका छोराछोरीहरुले यस कलेजमा अध्ययन गर्न सक्छन् । हामीले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिका प्याकेजहरु प्नि राखेका छौँ । त्यसैले म के भन्न चाहन्छ भने यहाँ यो वा त्यो वर्ग होइन, हरेक नेपालीहरुले अध्ययन गर्न सक्दछन् ।